पुनरावृत्ति | मन्दिरा मधुश्री | Saugat : Naya Yougbodh
आज बाह्र बर्षपछि अडिटको सिलसिलामा पुनः यो ठाउँ आइपुगें । शहरदेखि टाढा, सुविधारहित यो गाउँ । पैदल हिड्नुपर्ने । खुल्ला धुले बाटो । चर्को घाम । गर्मी र थकाइले मलाई लखतरान पारेको थियो । अफिसको क्वार्टरमा पुगेर झोला थन्काएँ अनि एकछिन पल्टिएँ ।
चैतको गर्मी चौपट्ट चर्केको थियो । पंखाले झन् तातो हावा ओकल्थ्यो । म झन उकुसमुकुस भएँ । बरु बाहिरको हावा नै अझ ताजा हुन्छ भनेर म बरण्डामा निस्किएँ । अफिस र क्वार्टर परिसर वरिपरि आँप र लिचीका बोटहरू बढेर ठूला भइसकेछन् । ढकमक्क फुलेको आँपको बास्ना मगमग आइरहेको थियो । म पहिले र अहिलेको परिवर्तन तुलना गर्न थालें ।
पहिले यो कम्पाउण्ड थिएन । खुल्ला चौर थियो । करेसाबारी र बगैंचा थिएन । कुनै बोटविरुवा लगाएको थिएन । कम्पाउण्डको एकापट्टि अफिस, अर्कोपट्टि क्वार्टर र पल्लो छेउमा चौकीदारको एउटा झुपडी थियो । त्यसैसँग टाँसिएको एउटा गाइगोठ र गोठमा ठूला–ठूला दुइटा दुधालु गाइहरू थिए । ती गाइको दूध छेउछाउका पसल र क्वार्टरमा बेच्थ्यो चौकीदार बूढो ।
म यहीं बरण्डामा बसेर गर्मीले पसिना पुछ्दै चौरमा घाँस काटिरहेकी माधुरीलाई एकटक लगाएर हेरिरहन्थें । मलाई रमाइलो लाग्थ्यो गर्मीमा असिनपसिन भएर घाँस काटिरहेकी तरुनी माधुरीलाई हेर्न । एक त श्याम वर्णकी, अर्काे यौवना । त्यसमा पनि घामले तात्तिएर रातो पिरो हुँदा हेर्नलायक हुन्थ्यो उसको अनुहार ।
अहिले त चौर पनि बगैंचा पो भएछ । चौकीदारको घर जीर्ण भएर अझैं उभिरहेकै रहेछ । गोठचाहिँ भत्किएछ । भत्किएको गोठ र कम्पाउण्ड वरिपरि लामो–लामो घाँस सुकिरहेको देख्दा अहिले कुनै गाइवस्तु नपालेको प्रष्ट झल्किन्थ्यो । मैले बगैंचा वरिपरिे र चौकीदारको घरतिर लम्की–लम्की हेरें । तर कतै पनि माधुरीलाई नदेख्दा ढुक्क भएँ– माधुरीको बिहे भइसकेछ ।
आँपको रूखमुनि कलमा दश/एघार वर्ष जतिकी एउटी केटी नाङ्गै नुहाइरहेकी थिई । उसलाई कसैको उपस्थितिको वा कसैले देख्लान् भन्ने मतलब थिएन न त कोही आइपुग्लान् कि भन्ने डर नै । लाग्थ्यो, उसमा अबोध बालापन गएकै छैन । त्यसैले त ऊ निःसंकोच र निर्भिक रूपमा आफ्ना अंग–प्रत्यङ्गहरूलाई माडी–माडी नुहाइको आनन्द लिइरहेकी थिई । म माथिल्लो तलामा भए पनि मेरो र उसको दुरी खासै टाढा थिएन । त्यसैले उसको शरीरमात्र नभएर उसका अंग–प्रत्यङ्ग साथै उसका बालसुलभ क्रियाकलापलाई राम्रैगरी नियाल्न सक्थें म ।
जीवनको एउटा कोशेढुंगा उमेरमा थिई ऊ । चुलबुले बालापन छोडेर चञ्चले किशोर वयको दुरी नाप्न खोजेजस्तो शरीरका केही अंगहरुमा हलुका परिवर्तन हुन थालेका थिए । उसका संवेदनशील अंगहरु देख्दा मेरा खुकुलिइसकेका इन्द्रियहरू पुनः उत्साही हुन थाले । मलाई अर्कै खालको अन्तर्शक्तिले घचघच्याउन थाल्यो । मेरा आँखाहरू उसको सर्वाङ्ग सेतो शरीरमा घुम्न र खेल्न थाले । अनि उसका वक्षस्थलमा गएर केन्द्रित भए ।
भर्खर उठ्न थालेका वक्षहरूलाई छोप्नुपर्छ भन्ने ज्ञान शायद उसलाई थिएन । वा भनौं शरीर सँगसँगै उसको बुद्धिमा कुनै परिर्वतन आइसकेको थिएन । त्यसैले ऊ निर्भिक र निस्फिक्री भएर नुहाइको आनन्द लिइरहेकी थिइ भने म उसलाई हेरेर रोमान्चित भइरहेको थिएँ ।
ऊ कल खिचेर लोहोटामा पानी थाप्थी अनि टाउकोमा खन्याउँथी । टाउकोमा खन्याएको पानी उसको छोटो–छोटो कपालमा बेह्रिएर छातीमा हाम फाल्थ्यो र उसका साना–साना चिचिला वक्षमा लपेटिएर चिप्लेटी खेल्दै नाइटोतिरबाट दुई खुट्टाको कापमा पुग्थ्यो अनि तुरुरु भएर भुइँमा पछारिन्थ्यो । उसले टाउकोमा खन्याएको पानी भुइँमा नपुगुञ्जेलसम्म म पानीसँगै कुदिरहेको थिएँ ।
उसको बालसुलभ क्रियाकलापलाई म आफ्नै पाराले सन्तुष्टि मानेर हेरिरहेको थिएँ । मैले हेर्दा त्यो अबोध केटी पूर्ण युवती हुँदै आई । उसको भकुल्ले गालामा लाली चढ्दै स्याउजस्ता हुँदै गए । उसका भर्खर उठ्न थालेका चिचिला वक्षहरू पनि बढ्दै–बढ्दै गए । अनि अघिसम्म हातको दुई औंलामा च्याप्न नपुगेको वक्षहरू हेर्दाहेर्दै हातमा नअटाउने भए ।
काउकुती लगाउँदा अघिसम्म खितखिताएर हाँस्ने अबोध केटी अहिले यसो छँुदा पनि रोमान्चित भएर शर्माउन थाली । अनि आफ्नो सर्वाङ्ग यौवनलाई लाजको खोल हाल्न थाली । म उसलाई सुम्सुम्याउन थालें । ऊ मलाई आलिंगन गर्दै मसँग टाँसिन थाली ।
‘ए सानी !’ परबाट चिच्याएको कुनै पाको पुरुष स्वरले म झसंग भएँ । केटीले ‘आएँ’को प्रत्युत्तरसँगै लोहोटा फ्यात्त भुइँमा फाली । अनि नजिकै राखिएको जामा सट्ट लगाई । उसलाई आफ्नो संवेदनशील अंग ढाक्न न त कट्टु चाहियो न त समिज नै । एकसरो पातलो जामामा उसले आफ्नो सिंगै यौवन ढाकी । उसको चिल्लो जीउभरि ढिक्का–ढिक्का भएर टाँसिएको पानीमा उसको जामा लपक्क भयो । छातीका स–साना चिचिला जामा भित्रबाटै उचालिएको प्रष्टै देखिन्थ्यो । मेरा आँखाहरु पनि त्यहीं जामाजस्तै गरी त्यही उचालिएको भागमा नै टाँसिएका थिए । उसले लोहोटामा पानी थापी र कपालबाट पानी चुहाउँदै त्यही चौकीदारको घरतिर लागी ।
मैले थाहा पाएँ– केटीको नाम सानी रहेछ । सानी चौकीदार बूढोको घरतिर जाँदा म आश्चर्यमा परें । किनभने मलाई थाहा थियो– उसकी श्रीमती थिइँन । उसकी एउटी छोरी माधुरीबाहेक अरू सन्तान पनि थिएनन् । तर यो सानी ? को हो त ? कतै बूढाले अर्की श्रीमती बिहे त गरेन ? कतै सानी त्यसैकी छोरी त हैन ? कि ऊ माधुरीको छोरी हो ? मेरो मनमा विभिन्न खालका कौतुहलपूर्ण प्रश्नहरू एकसाथ ओइरिन थाले ।
मेरो मन मस्तिष्कभरि सानी नै सानी थिई । बिभिन्न रुप र आकृतिमा । अबोध बालिकाबाट मस्त तरुनी भएर मलाई बिथोलेकी थिई केहीछिन अघि । उसले थाहा नपाए पनि ऊद्वारा बिथोलिएको म निकैबेरसम्म पनि आफ्नो नियन्त्रणमा आउन सकेको थिइँन । शरीर रातै र तातै थियो । कुनै अंगमा अप्ठ्यारो महसुस हुँदै थियो । मन किन–किन अनियन्त्रित भएर डोरिएर गयो सानीसँगै ।
उसले तानेको मन, मस्तिष्क र शरीर अलिक नियन्त्रणमा आएपछि म अनेकौं जिज्ञाशा र कौतुहल बोकेर तल ओर्लें । अनि चौकीदारको घरतिर लक्षित भएँ । चौकीदार बूढो बाहिर बरण्डामा राखिएको खाटमा बसेर एउटा चित्रो हम्कँदै वातावरणमा भएको गर्मी हटाउने असफल प्रयास गरिरहेको थियो । ऊ अब त झन जीर्ण भएछ । घर र ऊ लगभग उस्तै–उस्तै । दाँत पनि सबै फुक्लिसकेछन् । आँखा पनि भित्र धसिसकेका । हत्तपत्त मान्छे नै चिन्न छाडेछ । अझ भनौं, कसैको उपस्थिति पनि उसले झट्ट चाल पाउन छोडेछ ।
म उसको सामुन्ने पुगेर बोलाएँ– ‘चौकीदार दाइ ।’
‘को हो ?’ उसले भित्र पसिसकेको आँखाले ठम्याउने कोशिस ग¥यो । तर सकेन ।
‘म क्या त ! मुकुन्द सर । म दश–बाह्र बर्ष पहिले यही अफिसमा सरुवा भएर आ’को थिएँ नि । क्वार्टरमा बस्थें । तिम्रैमा खाना खान्थें । बिस्र्यौ ?’ मैले आफ्नो परिचय दिएर सम्झाउने प्रयास गरें ।
‘ए ऽऽ मुकुन्द सर पो हुनुहुँदोरहेछ ! घटना र समय बताएपछि उसलाई सम्झन मद्दत पुग्यो ।
नमस्कार साप । के गर्नु, बूढो भइयो । आँखाले पनि त्यत्ति ठम्याउँदैन, बल्ल पो चिनें । उसको आँखामा पूर्वस्मृति चम्कियो ।
‘अनि सन्चै छौ ?’ मैले सोधें ।
‘खै हजुर ! बूढाबूढीको शरीर के सन्चो हुनु र ! अब त यो जिन्दगीको भारी बिसाउन पाए पनि हुने । तर के गर्नु, योसँगै अर्को झन गह्रांै बोझ छ, कतै पनि बिसाउन नमिल्ने !’
‘कस्तो भारी ?’ नबुझेर सोधें मैले ।
‘एउटी टुहुरी नातिनी छ । त्यसैका लागि पनि त्यान्द्रो भएर बाँचिरहेको छु । यसलाई कसैको या त उसैको बाबुको जिम्मा लगाउन पाए त म यो बूढो शरीरको भार आरामले बिसाउने थिएँ । मर्दा सास पनि सजिलै जाने थियो ।’
‘कसकी छोरी ? माधुरीकी ?’ मैले उत्साहित हँुदै सोधें ।
‘हो हजुर ! उसैकी छोरी ।’ उसले नमिठो मुख बनाउँदै आँखाभरि आँसु पारेर भन्यो ।
‘अनि उसको बिहे कहाँ अनि कोसँग गरिदियौ त ? ऊ कहाँ छे त ऐले ?’ मैले झन बढी उत्सुकता देखाउँदै सोधें ।
मेरो प्रश्नले ऊ गम्भीर देखियो । उसका आँखा रसाउन थाले । काँधमा पसिना पुछ्न भनेर राखेको रुमालले आँखा पुछ्दै बूढोले भन्यो– ‘कहाँ र हजुर ! मैले त उसको बिहे नै गर्न पाइनँ । बिहेको डोली चढ्न नपाई सेतो डोली चढेर गई सधैंका लागि नआउने गरेर ।’
‘अनि नातिनी ?’ मैले आश्चर्य प्रकट गरें ।
‘त्यो त हजुर लामो कथा छ ।
‘तपाईं यहाँ आएको ताका त हो नि । म माधुरीको बिहे गरिदिन केटा खोजिरहेको थिएँ । माधुरीबाहेक मेरो अरू कोही पनि त थिएन । त्यसैले उसको बिहे राम्रैसँग गरिदिने बिचार थियो । आफन्तले पनि रामै्र घर परिवारको केटाका कुरा चलाइरहेका थिए । माधुरी पनि कति राम्री र असल थिई त्यो त हजुरले पनि देख्नुभएकै हो । त्यसैले म उसलाई ज्यादै माया गर्थें ।
अब उता अफिसको क्वार्टरमा धेरैजना सापहरू बस्नुहुन्थ्यो । कतिजना त हामै्रमा खाना पनि खानुहुन्थ्यो । क्वार्टरमा बस्ने कुन सापसँग हो, उसको लसपस भएछ । पछि बिहे गर्न आउँछु भनेर त्यो साप पनि उसलाई धोका दिएर भाग्नुभएछ । पछि पनि मैले कति केटाहरू ल्याएँ तर कसैसँग पनि उसले बिहे गर्न मानिनँ । केही गर्दा पनि नमान्नुको कारण सोध्दा पछिमात्र बल्ल–बल्ल कारण बताई । त्यतिमात्र हैन उसको पेटमा त त्यो सापको बच्चा पनि रहेछ ।
केही दिनपछि उसले घरमै एउटी छोरी पाई । बिना बाबुको बच्चा जन्माउँदा दुनियाँको घृणा, उपेक्षा र दुत्कार अनि सापबाट पाएको धोकाको पीर खप्न नसकी एकदिन ऊ बहुलाइ । ऊ सधैंभरि एउटै कुरा मात्र भनिरहन्थी । रातो झोलाभरि सारी, चोलो, सिन्दूर, पोते, चुरा लिएर साप आउनुहुनेछ । मेरो बिहे हुन्छ । म दुलही हुन्छु । आदि आदि ।
अफिसमा कुनै गाडी आउनै हुँदैनथ्यो । खुशी भएर उफ्रेर पुगिहाल्थी, मलाई लिन साप आउनुभयो भन्दै । बाटामा कुनै बस आएको देख्नै नहुने, गएर रोक भन्दै झुण्डिन्थी । सँगसँगै कुद्थी साप आउनुभो भन्दै । यसरी झुण्डिँदा, कुद्दा कतिपटक लडी, कतिचोटि घाइते भई । कतिचोटी खलासीले नै बहुलाइ भन्दै घचेटे, कुटे । तर साप एकदिन ऊ कता हराइ–हराई । कहाँ गई ? कसैले पनि देखे भेटेको थाहा भएन । मैले पनि धेरै खोजें, तर कहीं पनि भेटिनँ ।
चार दिनपछि परको पाताले जंगलमा दाउरा खोज्न जानेले कुहिन थालिसकेको उसको झुण्डिरहेको लास भेटे । बिचरा माधुरी ! साह्रै बिजोग भएर मरी । उसलाई धोका दिने कुनचाहिँ पापी हो, त्यसले त सात जन्मसम्म पनि शान्ति नपाओस् । मेरी छोरीभन्दा बिजोग भएर मर्नु परोस त्यो पापीले ।’ बूढो छोरीको पीडामा भक्कानो फुटाएर रुन थाल्यो ।
चौकीदारको मुखबाट माधुरीको दुःखदायी अन्त्यको कथा सुनेर म पनि लल्याकलुलुक भएँ । ढक्क आङ फुल्यो ।
मैले बूढोको काँध थपथपाउदै सान्त्वना दिएँ । अनि डराउँदै–डराउँदै सोधें, ‘अनि उसलाई त्यसरी धोका दिने को रहेछ त ? नाम भनिन् त उसले ?’
‘खै हजुर ! मैले कति सोधें । कोसँग तेरो लसपस भएको थियो ? नाम भन । म उहाँलाई खबर गर्छु । नत्र म उहीं पु¥याएर तँलाई जिम्मा लगाइदिन्छु भनें । तर उसले भन्दै भनिनँ । के पो गर्न सक्थें र साप मैले पनि टुलुटुलु हेर्नुसिवाय । छोरी थिइ, मार्नु पनि त भएन । पछि बहुलाएपछि भने रातो झोला, सारी, चुरा, सिन्दूर, पोते, लिएर साप आउनुहुन्छ । मलाई बिहे गर्नुहुन्छ मात्र भनेर बर्बराइरहन्थी ।’
‘धन्य भगवान !’ मैले सुस्केरा छोडेर भगवानलाई धन्यवाद दिएँ । मलाई माधुरीको याद र घटना आँखा वरिपरि झल्झली भयो ।
अफिस परिसरको चौरमा पसिनाले लथ्रक्कै भएर घाँस काटिरहेकी माधुरीलाई कहिलेकाहीं म क्वार्टरको बरण्डामा बसेर हेरिरहन्थें । घाम धेरै छ एकछिन आउ बस शीतलमा भनेर जिस्काउथें पनि । ऊ लजाएर झन रातो पार्थी अनुहार ।
सधैं केही न केही भनेर जिस्काउँदा जिस्काउँदा पछि त ऊ आफै जिस्कने भएकी थिइ मसँग । उसैको घरमा उसैले पकाएको खाना खान्थें म । पछि–पछि मलाई तातो दूध पु¥याउन मेरो कोठामा आउन सक्ने भएकी थिइ ऊ । दूधको गिलास जस्तैगरी एकदिन उसले आफ्नो शरीर पनि सम्पूर्ण रुपमा समर्पण गरी मलाई । तातो दूधजस्तै मैले उसको जवानी पनि पिएको थिएँ धीत मरुन्जेल ।
म हिड्ने बेलामा मेरो रातो झोला समाएर ‘मलाई पनि लैजानू’ भनेकी थिई उसले । उसबाट छुटकारा पाउन मैले म यहीं झोलामा सारी, चोलो, सिन्दूर, पोते लिएर बिहे गर्न आउँछु भनेर उम्केको थिएँ । ती घटना, दृश्य अहिले पुनरावृत्ति भइरहेका थिए मस्तिष्कमा ।
मैल धेरै वर्षअघि आफ्नो जवानीको जोशमा गरेको पौरुषत्वको परिणाम यति भयानक र दर्दनाक हुन्छ होला भनेर सोचेको पनि थिइनँ । जवानीको उन्मादसँगै त्यस घटनालाई पनि सजिलै बिर्सिदिएको थिएँ ।
आज यतिका वर्षपछि समयले मलाई यही ठाउँमा ल्याइपु¥याएको थियो । जहाँ मैले यौवनका मीठा र आनन्दका क्षणहरू बिताएको थिएँ । जहाँ एउटी निश्चल र सरल युवतीको सम्पूर्ण यौवन पिएको थिएँ । जसले गर्दा उसको जीवन कारुणिक र दर्दनाक भएर अकालमा बित्यो । जहाँ एउटी अबोध टुहुरी केटीले आफ्नो आमाको छाती चुसेको मीठा कल्पनामा आफ्नो कलिला औंला चुस्दै अबोध बालापन बिताइ । अनि मान्छेका घिनलाग्दा अनुहारबीच आफ्नो बाबुको परिचय खोज्दै सुुुटुक्क आएको यौवनसँग फक्रिरहेकी थिई ।
यो छोरी अहिले मसँग भएकी भए ! यसले बाबुआमाको परिभाषा खोज्दा खोज्दै तरुनी हुन पर्दैनथ्यो । अनि आफ्नै बाबुबाट कल्पनामै भए पनि आफ्ना अविकसित छाती नपाउनु पर्दैनथ्यो । अंग्रेजी स्कुलमा पाँच छ क्लासमा पढ्ने उमेर भए पनि दुर्भाग्यवश अहिलेसम्म क, ख पनि चिनेकी छैन यसले ।
मलाई लाग्यो– अब यसमा पनि माधुरीकै पुनरावृत्ति हुनसक्छ । आँखा अगाडि भोलि सानीले भोग्नुपर्ने जीवनको झझल्को भयो । मेरो जवानीको उन्माद कु–कार्य र त्यसको भयंकर परिणामलाई सुन्दा, सम्झिदा, देख्दा, आफैमा ग्लानी र पश्चाताप भयो । उकुसमुकुस भएर आयो । ओठमुख सुक्यो ।
मैले बूढोसँग पानी खान मागें । उसले सानीलाई पुका¥यो र पानी ल्याउन भन्यो । सानी भित्रबाट अघि कलमा नुहाएर पानी भरेर ल्याएको उही लोहोटा लिएर आइ र म तिर ‘यी पानी’ भनेर लोहोटा तेस्र्याई ।
कपालबाट चुहेको पानीले उसको पातलो जामाको माथिल्लो भाग झन लछप्पै भएर भिजेको थियो । चिसो जामा छातीका आकार प्रकार देखिने गरी झन् लपक्क टाँसिएको थियो उसको जीउमा । पातलो जामाभित्र उसका तिघ्राहरू पनि छ्याङ छ्याङ्ती देखिएका थिए । नजिकबाट उसलाई यसरी देख्दा पनि अहिले अघिको जस्तो कुनै उत्तेजना भएन मलाई । साँच्चै भनुँ भने अहिले उसलाई यस रुपमा देख्दा पनि उसको शरीरतिर ध्यान नै गएन मेरो । मैले केवल उसका आँखामा मात्र हेरिरहें । उसका निर्दोष आँखामा माधुरीको प्रतिबिम्ब झल्किन्थ्यो ।
ऊ मेरै अंश हो भन्ने भएपछि मलाई उसँग बोल्न मन लाग्यो । उसलाई छुन मन लाग्यो । खेलाउन मन लाग्यो । सुम्सुम्याउन अनि काखमा राखेर निचोर्न मन लाग्यो । म्वाइँ खान मन लाग्यो । तर मैले हात बढाउन सकिनँ । केवल आँखाले मात्र उसलाई एकोहोरो सुम्सुम्याइरहें ।
म टोल्हाएको देख्दा सानीले लोहोटा बोकेको हात तेस्याउँदै ‘पानी’ भनी । झसङ्ग हुँदै लोहोटा समाउन खोजें । तर हातबाट चिप्लिएर लोहोटा फ्यात्त भुइँमा खस्यो ।
लोहोटा खसेको आवाजसँगै झस्किएर चौकीदार बूढोले एकचोटि हिक्क ग¥यो र पुर्लुक्क ढल्यो एकातिर । लोेहोटाबाट पोखिएको पानीसँगै चौकीदारले पनि आफ्नो जीवनको गति नापिसकेको थियो ।